Haydarojiin - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Haydarojiin)
- ← Haydarojiin → Helium
Haydarojiin qaab liis ah
Gaas midab la'
Bluug iftiin ah heerka palasmaha
Diilimo qafiif ah ee haydarojiinta
Magac, summad, tiro
Haydarojiin, H, 1
Loogu magac daray
Hoor Cufnaan bar dhalaal
Qaadka kul mooler
Dabar wadaag gacan
Dhamaan aysotoob degan
Maqaalka rasmiga ah: Aysotoob Haydarojiin
Hydrogen Waa qayb ka mid ah curiye yaasha Kimikada Waxaana loo soo gaabiyaa "H" Atam kiisuna waa 1 madab iyo dhadhan toona maleh
2 Taariikhda Haydarojiinta
3 Atomka Haydarojiinta
5 Isticmaalka Haydarojiinta
Haaydarojiin (Ingiriis: Hydrogen) calaamad H waa curiye kimiko ah oo tiroda atomkiisu tahay kow. Haaydarojiintu waa curiyeha ugu fudud dhamaan curiyeyaasha, taasina waa sababta looga dhigay lambar kow liiska Diwaanka Curiye.
Meereyaal iyo Xidigyo badan ayaa ka intooda u badan ka sameeysan curiyan Haydarojiinta. Sidoo kale Haydarojiintu waa Neef bilaa ur, dhadhan iyo midab ah isla markaana firfircooni uu kula falgalo curiye kale.
Dhinaca kale waa curiye aad muhiim ugu ah nolosha dhulka, sababtoo ah marka labo atom ama hal malakuyuul oo Haydarojiin la fal-gasho Ogsajiin waxaa soo baxa biyo.
Fal-galkaas waxaa uu u dhacaa sidan:
2H + 1O = H2O.
Haydarojiintu waa curiyaha kowaad ee hawoda ugu badan Koonka waa qiyaas dhan 75%, waxa ku xigaOgsajiin iyo Hiliyaam.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Haaydarojiin&oldid=172968"